हिन्दु जागरण नेपालको महिला विभाग अध्यक्षमा रमा प्रसाई – सजल सन्देश
हिन्दु जागरण नेपालको महिला विभाग अध्यक्षमा रमा प्रसाई
By Sajal sandesh	 Aug 8, 2020
विराटनगर – हिन्दु जागरण नेपाल, महिला बिभाग मोरङको अध्यक्षमा रमा प्रसाई चयन हुनुभएको छ । हिन्दु जागरण नेपालको महिला बिभाग मोरङको शनिवार कार्य समिति पुर्नगठन गरिएको हो । समितिको अध्यक्षमा प्रसाई सहित १९ सदस्यीय नयां कार्यसमिति भएका हुन् ।
उपाध्यक्षमा गोमा रिमाल, सचिवमा सिता सुबेदी, सह सचिवमा अनु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा सिता खरेल प्रसाई र सह- कोषाध्यक्षमा सबिना पोखरेल चयन हुनुभएको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा रमा अधिकारी, टिका खनाल, भगवती पौडेल, बिरु बजगाई, शकुन्तला सुबेदी,शिलु कार्की, नैनकला ढुंगेल, मधु दाहाल निरौला, सम्झना ओझा, शान्ता दाहाल. शारदा मैनाली, सुमित्रा भट्टराई र टिका भट्टराई रहनु भएको छ ।
यसैबीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रसाईले धर्मपरिवर्तन मुक्त, जातीय छुवाछुत मुक्त र सनातन हिन्दुराष्ट्र नेपाल निर्माणका लागी डटेर लागिपर्ने बताउनुभएको छ। हिन्दुहरुले मान्ने धर्म र संस्कृतिलाइ विदेशी दलालहरुले ध्वस्त पार्न खोजेको बताउदै उहाले देश जोगाउन धर्म जोगाउनुपर्ने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कोभिड – १९ को त्रासदीका कारण सफ्टवेयरको प्रयोगबाट गरिएको वैठकमा संस्थाका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष ज्यो. गणेश प्रसाद भट्टराई प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो । भने कार्यक्रम संचालन मोरङ जिल्ला सचिव कुशल कुमार निरौलाले गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश २ मा थपिए १ सय १७ जना कोरोना संक्रमित